SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bislama Catalan Cebuano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kannada Kinyarwanda Kirghiz Korean Lari Lithuanian Luganda Luvale Malagasy Malay Malayalam Mingrelian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Thai Turkish Twi Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Takasarudza Kurarama Upenyu Husina Twakawanda-wanda
Murume anonzi Madián nemudzimai wake Marcela vairarama upenyu hwemutambarakede muMedellín, kuColombia. Basa raMadián raibhadhara chaizvo, zvekuti vaigara muimba yakanaka. Asi pane chimwe chinhu chakaita kuti vaongorore zvavaikoshesa sevashumiri vaJehovha Mwari. Vanoti: “Muna 2006 takapinda gungano raiva nemusoro wekuti: ‘Ramba Uine Ziso Rakanaka.’ Hurukuro dzakawanda dzakasimbisa pfungwa yekuti tirarame upenyu husina twakawanda-wanda kuti tigone kushumira Mwari zvizere. Patakapedza gungano, takaona kuti takanga tichiita zvakapesana naizvozvo. Taiva vanhu vanoda zvekutenga chaizvo uye taitova nechikwereti chakakura chaida kubhadharwa.”
Zvavakadzidza zvakaita kuti Madián naMarcela vatange kuchinja kuti vararame upenyu husina zvakawanda. Vanoti: “Takatanga kuderedza mari yataishandisa. Takatama tichinogara muimba diki, tikatengesa mota yedu ndokutenga mudhudhudhu.” Uyezve vakarega kuenda muzvitoro zvihombe vachiitira kuti vasava pamuedzo wekungokumba zvinhu. Vakatanga kupedza nguva yakawanda vachitaura nevavakidzani vavo nezveBhaibheri. Uye vakashamwaridzana nevanhu vaishingairira kushumira Jehovha Mwari semapiyona chaiwo. *
Pasina nguva, Madián naMarcela vakasarudza kuwedzera ushumiri hwavo nekutamira kuungano diki yekumamisha yaida kubatsirwa. Kuti vagone kuita izvi, Madián akasiya basa. Mukuru wake webasa akafunga kuti aipenga kusiya basa. Saka Madián akamubvunza kuti: “Munotambira mari yakawanda, asi muri kufara here?” Akataura kuti akanga asiri kufara nekuti aiva nezvinetso zvakawanda zvaaisagona kugadzirisa. Madián akabva amuti: “Saka haisi nyaya yekuti unotambira mari yakawanda sei. Nyaya iri pakuti chii chinoita kuti ufare. Kudzidzisa vanhu nezvaMwari kunoita kuti ini nemudzimai wangu tifare, uye tinoda kuwedzera mufaro wacho nekushandisa nguva yedu yakawanda tichiita basa iri.”
Madián naMarcela vari kunyatsofara uye kugutsikana nekuti kushumira Mwari ndiko kunonyanya kukosha muupenyu hwavo. Vava nemakore 13 vachishumira muungano dzine vaparidzi vashoma kuchamhembe kweColombia. Uye iye zvino vari kufara kushanda semapiyona chaiwo.
^ ndima 2 Mapiyona chaiwo anogadzwa nehofisi yebazi reZvapupu zvaJehova munyika yacho kuti aparidze mashoko akanaka nguva dzese mune dzimwe nzvimbo. Vanopiwa kamari kekuti vabatsirikane pane zvekurarama nazvo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Takasarudza Kurarama Upenyu Husina Twakawanda-wanda
ijwex nyaya 14
Kuparidza Kunzvimbo Iri Kwayo Yoga​—Australia